Ezantsi kwiDolophu yaseTórshavn-iApartment enkulu - I-Airbnb
Ezantsi kwiDolophu yaseTórshavn-iApartment enkulu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRói Alexander
Ngendawo ekuyo kwiziko laseTórshavn unokuyibona imeko yesixeko kwigumbi lokuhlala kwaye uqiniseke ukuba awuphoswa yiyo nantoni na.
Ukuba uhamba nabahlobo / usapho, indawo yokuhlala ifanelekile. I-120 sq. yeemitha kwaye ibandakanya yonke indawo ecingayo.
Ngendlu yethu, ngokuqinisekileyo uya kuziva ukuba likhaya elikude nekhaya. Awuyi kufuna ukuba nexhala malunga nokuba uza kuhoya phi na indawo yokuhlamba impahla, ukufumana phi ukufikelela kwi-intanethi, ukupheka phi okanye ukuphazamisa abanye abantu kwisakhiwo.Ngaphezu koko, ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo kunye neebhedi zokulala, iitawuli njl. Ngokungena kwakho, indawo yokupaka yabucala kunye nevenkile yesibane ekumgangatho ophantsi njengommelwane wakho osondeleyo, unokuqiniseka ukuba ubumfihlo bakho buya kuhlonitshwa.
Le ndlu ibekwe kwisitrato sokuthenga kumbindi weTórshavn. Iivenkile ezisesitratweni ziquka ivenkile yokutya, iigalari, ivenkile yekofu, impahla yangaphantsi, izinto zokuthambisa, impahla, eyethu ivenkile yezibane nokunye. Yonke into ngaphakathi komzuzu we-2 umgama wokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Rói Alexander
Ekubeni siqhuba ivenkile kumgangatho ophantsi, ngaphantsi kwendlu, unokuhlala umisa ngevenkile, ukuba unemibuzo, izicelo okanye ungathanda isikhokelo phezu kwesixeko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tórshavn